खच्चरको कथा, खच्चरको ब्यथा - कञ्चन टुडे
खच्चरको कथा, खच्चरको ब्यथा
शरदचन्द्र ओझा, नेपालगँज-१४, भवनियापुर्
जहिले जहिले म नेपालगँजमा हुन्छु, अनि देख्छु झुण्डका झुण्ड खच्चर, अनि सोच्छु ई घोडा भन्दा भिन्नै प्रजातीका जनावर यहाँ मात्र किन यति धेरै त ? अनि घोतलिन्छ्, मेरो अनुसन्धान गर्ने मन अनि तयार हुन्छ एउटा लेख ? खच्चर भन्ने बित्तिकै एउटा त्यो जनावरको, जस्ले भारी बोक्छ, सुरुसुरु काम गर्छ, घाँस खान्छ त्यस्को सम्झना आउँछ ।
खासै भन्नु पर्दा, खच्चर भनेको गधा र घोडाबाट जन्मिएको सन्तान हो, बाउ गधा अनि आमा घोडाबाट जन्मिएको लाई खच्चर भनिन्छ । यदिआमा गधा भए चाहिँ हिन्नी जन्मिन्छ ।
नेपालका अन्य शहर भन्दा धेरै नै बढी खच्चर बाँके बर्दियामा अझै पनि पाईन्छ, यसो बुझ्दा खासै अर्थ नरहेता पनि यहाँ यस्लाई पाल्ने हुर्काउने चलन ब्यापक छ ।
खच्चर पाल्ने कारण हरु अझै धेरै होलान, तर केहि बिशेष निम्न छन ।
(१) स्थानिय निर्माण सामग्री लगायत ढुवानी सेवाका निमित्त्
(२) सवारी ओसार पसारका निमित्त्
(३) गाउँघरमा घोडचढीका निमित्त्
(४) पहाड तिर तराईका सामान बोकाएर लगि बेचबिखनका निमित्त्
(५) पहाड तिर लगि खच्चर बिक्री गर्नका निमित्त्
यसरी प्राय शहरका बिभिन्न गली कुचा खाली ठाउँमा आफ्नै पाराले कसैको खुट्टामा डोरी बाँधी दिएका ई खच्चरहरुको ताँतीनै देख्न पाईन्छ । यिनिहरु कसैलाई हानी नोक्सानी न पुर्याइ घाँस चरी रहेको पनि देख्न सकिन्छ ।
सामान्यतया, खच्चरहरु तिन प्रकार कम तौलका, मझौला तौलका अनि बढी तौलका हुन्छन । खच्चरहरु घोडा भन्दा बढी बाँच्दछन भने, गधा भन्दा बढी बुद्धीमान हुन्छन ।
सामान्यतया यिनिहरु ३७० देखि ४६० कि ग्रा सम्मका हुन्छन भने केहि अझै कम १६० कि ग्रा सम्मका पनि हुन्छन । एकै तौलका घोडा र खच्चरमा, यिनिहरुलाई नै कम आहारले पुग्ने गर्दछ, र यिनिहरुनै घोडाको तुलनामा बढि भारी बोक्न सक्दछन । ईतिहासकारहरुका अनुसार पहिला पहिला खचरहरुलाई सेनाले प्रयोगमा ल्याएका थिए ।
खाध्यान्न ढुवानी, सस्त्र ढुवानी, साना रेन्जसम्मका तोपलाई तिन्को पिठमा राखी प्रयोग गर्न, भारीभरकम हतियार बोक्ने गाडालाई तान्न प्रयोग गरिन्थ्यो ।
२००३ सम्मको लेखाजोखा अनुसार चिन सबैभन्दा ठुलो खच्चरको खपत हुने बजार हो भने त्यस पछि मेक्सिको अनि सेन्ट्रल तथा दक्षिण अमेरीकी मुलुकहरु पर्दछन । उहिलेका पुस्तकहरुका अनुसार कृस्टोफर कोलमबसले खच्चरलाई नया बिश्वसँग परिचित गराएका थिए ।
अमेरिकामा प्रथम पटक जर्ज वासिँगटनको घरमा ५७ वटा खच्चर जन्मिएका र तीनलाई सम्भार गर्न सकिएकोले जर्ज वासिँगटनलाई अमेरिकी खच्चरका पिता भनेर पनि भनिन्छ । ज्ञातब्य रहोस, उक्त समयमा यु एस मा खच्चर त्यती प्रचलनमा आईसकेको थिएन ।
अहिले पनि नेपाल लगायत बिश्वका प्राय सबैजसो मुलुकमा, अप्ठ्यारा टेढाबाङ्गा पहाडी र हिमाली बाटाहरुका निमित्त खच्चरलाई नै उपर्युक्त सवारी साधनको रुपमा लिईन्छ ।
बुग्गी भनेर पक्कै सुन्नु भएको छैन होला, नेपालगँज तिर मान्छे बोक्ने खच्चर गाडीलाई बुग्गी अथवा बग्गी भनिन्छ, सदर लाईनमा कुनै बेला प्रशस्त बुग्गी देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ धम्बोजी चोक देखि छिमेकी देशको रुपैडिहासम्म बुग्गीको सवारी चढन पाईन्छ ।
प्राय, पहाड तिर बाट ईण्डिया जानेहरुलाई बिशेसत यस्को सवारी चढेको देखिन्छ, त्यसो त अरुहरु पनि चडेकै हुन्छन ।आफ्नो शुरमा कुनै मेसिनलेझैँ बुग्गी तानेर लाने खच्चरलाई खाली समयमा झोलामा राखेको घाँस ख्वाउँदै गरेको पनि देखिन्छ ।
एउटा निश्चित बर्गको कमाईको उपर्युक्त साधन रहेको यो खच्चरको सवारी, बेचबिखन, ढुवानी ब्यवशायलाई, हुन त अहिलेका मेशिनबाट चल्ने साधनहरुले बिस्थापित गर्दै गई राखेका पनि छन ।
एउटा जनावरलाई पालेर ब्यवशाय गर्नु भन्दा मेशिनले चल्ने गाडी किन्नु आजभोली उपर्युक्त ठानिन्छ, त्यसो त खच्चरको पनि मुल्य आकासै छुने गरी न बढेको पनि होईन ।
खुट्टामा नेल ठोकिनु, त्यहि खुट्टा अलकत्रे सडकमा हिन्दा हिन्दा घाउ हुनु, पाक्नु ई खच्चरका दुखपनि हुन । उता घाँटीमा बाँधिएको पट्टा ईत्यादीले पनि घाउ पारेकै हुन्छन । तर खच्चर एउटा यस्तो जनावर हो, जस्ले घोडा र गधाभन्दा बढि सहनशिलता आफुभित्र पालेको हुन्छ ।
त्यसै कारणले गर्दा मेहनतको काममा घोडा अथवा गधालाई भन्दा खच्चरलाई बढि प्रयोगमा ल्याईन्छ । अङ्ग्रेजीमा मुल नामले चिनिन्छ भने मुल नामबाट यु एस लगायत युरोपियन मुलुकहरुमा यस्को नामले स्पोर्ट्स क्लब, सिनेमा ईत्यादीको नामकरण पनि गरिएको हुन्छ ।
खाशै भन्नु पर्दा खच्चर, घोडा, गधा ईत्यादी जनावरहरु मानव जिवनका अभिन्न अँगा हुन, ईनीहरुको योगदान मानव सभ्यताको बिकास देखि आझ सम्म पनि छ । ऐतिहासिक्, धर्मग्रन्थहरुमा पनि ईन्को बर्णन स्वर्णिम अक्षरले लेखिएका छन ।
अझै पनि खच्चर, घोडा, गधाका कयौँ प्रजाती जङ्गली रुपमा पनि पाईन्छन, एउटा लुप्त हुन लागेको प्रजाती त मरुभुमीमा पनि पाईएको छ ।
केहि बर्ष पहिले उपल्लो मुस्ताङ्ग मा पनि धेरै सानो तर बाख्राजस्तो प्रजातीको घोडा भेटिएको कुरो टेलीभिजनमा देख्न पाईएको थियो ।